Madaxda Deegaanka Soomaalida iyo hoggaamiyeyaasha ONLF oo Asmara ku kulmay - Halbeeg News
ASMARA (HALBEEG) – Magaalo madaxda dalka Eritrea ee Asmara, waxaa gelinkii dambe ee shalay oo Talaado ahayd ku kulmay, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya iyo hoggaamiyeyaasha Jamhadda Wadaniga ee Xoraynta Gobolka Ogaadeeniya (ONLF).
Madaxwaynaha Deegaanka Soomaalida Mustaf Muxumed Cumar iyo Wasiirka Isgaarsiinta Itoobiya ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Dimuqraadiga ee Deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Shidde, ayaa la kulmay saraakiil uu horkacayey Hoggaamiyaha ONLF Admiral Maxamad Cumar.
Ergooyinka labada dhan ayaa kulankooda kaddib isku afgartay in lasii dardargeliyo wadahadallada, si xal kama dambays ah looga gaaro khilaafaadkii muddada dheer soo jiitamayey, loolana jaan qaado isbedellada siyaasadeed ee bilihii u dambeeyey ka dhacayay dalka Itoobiya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
Kulankan ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo markii ONLF ku dhawaaqday xabbad-joojinta, waxayna wararku intaas ku darayaan in shirkani gogolxaar u yahay wadaxaajood heerkiisu sarreeyo oo u furmi doona Dowladda Itoobiya iyo Jamhadda ONLF, kaas oo lagu rajo weynyahay in si rasmi ah heshiis nabadeed labada dhinac ugu kala saxiixdaan.
Madaxwayne Cumar, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in madaxda Jamhadda ONLF uu kala sheekaystay halgalnkii dheeraa ee ay xornimada gobolka usoo galeen iyo waliba sidii ay mar kale deegaannadooda dib ugu soo laaban lahaayeen.
Maanta waxaan booqasho rasmi ah ku tagney Magaalada Asmara ee Dalka Eriteria, Waxaanu kula kulanay Madaxda ugu sare ee Ururkana JWXO ONLF, waxaan ka Wada hadalney Taariikhda Halgankii dheeraa & ku guriyo noqoshada Dalka gaar ahaan Deegaanka Soomaali Galbeed.
Alle ayaa Mahad leh pic.twitter.com/c5laQXYAez
— Mustafa Omer (@Cagjaromer) September 18, 2018
Toddobaadkan horraantiisii ayey ahayd markii magaalada Addis Ababa si diirran loogu soo dhoweeyey hoggaamiyeyaasha Jamhadda OLF ee tan iyo sannadkii 1973 kasoo dagaallamaysay gobolka Oromada.
Dowladda Itoobiya ayaa bishii July ee lasoo dhaafay waxay liiska argagixisada ka saartay Jamhadaha ONLF iyo OLF, taas oo horseedday in labadooduba xabbad-joojin ku dhawaaqaan, inkastoo weli heshiis rasmi ahi ka dhex dhicin Dowladda Itoobiya iyo Jamhadda ONLF.